Ndụ, Ọnwụ, na olile anya nzọpụta - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Ndụ, Ọnwụ na Olileanya Nzọpụta
Ndụ, Ọnwụ, na Olileanya Nzọpụta
N'ubọchi Chineke mere uwa na elu-igwe, Jehova, bú Chineke, we kpua madu nke ájá sitere n'ala, we kuo ume ndu n'oghere imi-ya abua, madu ahu we ghọ nkpuru-obi di ndu. ( Jenesis 2:4-7 ) Chineke sikwa n’anụ ahụ́ Adam kpụọ otu nwaanyị (Jenesis 2:21-23), nke nwoke ahụ kpọrọ Iv n’ihi na ọ bụ nne nke ihe nile dị ndụ. ( Jenesis 3:20 ) Ọ bụ ezie na Adam bi na paradaịs ná mmekọrịta chiri anya ya na Chineke, nwoke mbụ ahụ so nwunye ya mejọrọ ná mmehie bụ́ nke Chineke dọrọ aka ná ntị banyere ya, sị: “Ị ga-anwụrịrị.” ( Jenesis 2:17 ) Ya mere, nwanyị ahụ na nwoke ahụ mara onwe ha ikpe ọnwụ, dị ka ọbụbụ ọnụ ahụ Chineke gwara Adam si dị, sị: “Ọsụsọ ihu gị ka ị ga-eri, ruo mgbe ị ga-alaghachi n’ala, n’ihi na i si na ya pụta. e weere; n’ihi na ájá ka ị bụ, ọ bụkwa ájá ka ị ga-alaghachi.” ( Jenesis 3:19 ) N’ihi ya, Jehova Chineke zipụrụ nwoke ahụ na nwunye ya na paradaịs ma machibido mmadụ ịta nri n’osisi nke ndụ ahụ. (Jenesis 3:24)
Ya mere nmehie sitere n'otù madu bata n'uwa, ọnwu we si n'aka nmehie bia, ọnwu we si otú a gbasaa rue madu nile. ( Ndị Rom 5:12 ) Dị ka iwu ezi omume Chineke si dị, mkpụrụ obi nke na-emehie ga-anwụ. ( Ezikiel 18:4 ) N’ịbụ ndị e jiworo kewapụ onwe ha n’ebe Chineke nọ site ná mmehie, a maraworị ihe a kpọrọ mmadụ ikpe. ( Jọn 3:18 ) Ọ dịghịkwa onye a site n’ọrụ ka a kpọ n’onye ezi omume n’anya Chineke. ( Ndị Rom 3:20 ) E boworị ihe a kpọrọ mmadụ ebubo na mmadụ nile nọ n’okpuru mmehie, dị ka e deworo, sị: “Ọ dịghị onye bụ onye ezi omume, ọ dịghịkwa otu onye; ọ dighi onye nāghọta; ọ dighi onye nāchọ Chineke. Ha nile ewezugawo onwe-ha; ha aghọwo ihe efu; ọ dịghị onye na-eme ezi ihe, ọ dịghịkwa otu onye.” (Ndị Rom 3:9-12) N’ịbụ ndị na-enweghị nchegharị nke na-eduba ná ndụ, mmadụ nwụrụ anwụ ná njehie na mmehie, na-agbaso ụzọ ndụ nke ụwa a, na-agbaso onye isi nke ike nke ikuku, bụ́ mmụọ nke na-arụ ọrụ ugbu a n’ụwa. umu-ndikom nke nnupu-isi. (Ndị Efesọs 2:2) Ụmụ mmadụ adawo, ha nile emebiwo dị ka Jisọs kwuru, “ọ dịghị onye bụ ezi ihe ma e wezụga nanị Chineke.” ( Luk 18:19 ) Ya mere ọnwụ achịala n’aka Adam, ọbụna n’isi ndị mmehie ha na-adịghị ka mmebi iwu Adam. (Ndị Rom 5:14)
Nke mbụ dị mkpa bụ na Jizọs anwụọla maka mmehie anyị, e liri ya, kpọlitekwa ya n’ụbọchị nke atọ. (1 Ndị Kọrint 15:3-4) Olileanya na okwukwe anyị nwere n’Oziọma ahụ dabeere ná nkwa ahụ bụ́ na anyị ga-enwetakwa mbilite n’ọnwụ site ná ndị nwụrụ anwụ ná ngwụsị nke oge a. ( Jọn 11:24 ) Ọ bụ ezie na mmadụ mbụ bụ́ Adam ghọrọ ihe dị ndụ, Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. (1 Ndị Kọrint 15:45) Dị nnọọ ka anyị yiworo onyinyo nke onye bụ́ ájá, anyị ga-ebukwa onyinyo nke onye eluigwe. (1 Ndị Kọrint 15:49) N'oge a ga-afụ opi ikpeazụ, a ga-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie ka ha ghara idi ire ure ma gbanwee. ( 1 Ndị Kọrint 15:52 ) N’ihi na ahụ́ nke na-emebi emebi aghaghị iyikwasị ihe na-apụghị ire ure, ahụ́ ahụ nke na-anwụ anwụ aghaghịkwa iyikwasị anwụghị anwụ, ka o wee mee, dị ka e deworo, sị, “E lodawo ọnwụ n’ime mmeri.” (1 Ndị Kọrịnt 15:54) Anyị kwenyere na Jizọs nwụrụ ma bilie ọzọ - n'otu aka ahụ, Chineke ga-akpọta ndị dara n'ụra ura na Kraịst. (1 Ndị Tesalonaịka 4:14) N'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-alọghachi ma si n'eluigwe rịdata n'iti mkpu nke iwu, ndị nwụrụ anwụ n'ime Kraịst ga-ebilikwa. (1 Ndị Tesalonaịka 4:16)
N’agbanyeghị ọbụbụ ọnụ ọnwụ sitere na njehie otu onye, ​​onyinye nke ezi omume na-eso ọtụtụ mmebi iwu na-achị ugbu a na ndụ site n’aka otu nwoke ahụ bụ́ Jizọs Kraịst. ( Ndị Rom 5:15 ) Ya mere, dị ka otu njehie ahụ wetaara mmadụ nile ikpe, otú ahụ ka otu omume nke ezi omume na-eduga n’ikpe ziri ezi na ndụ maka mmadụ nile. ( Ndị Rom 5:18 ) Dị ka e mere ọtụtụ mmadụ ndị mmehie site ná nnupụisi otu onye ahụ, otú ahụ ka a ga-esi na-erubere otu onye ahụ mee ọtụtụ mmadụ ndị ezi omume. ( Ndị Rom 5:19 ) N’ihi na dị ka ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ esiwokwa n’aka mmadụ. (1 Ndị Kọrint 15:21) Dị ka mmadụ nile na-anwụ n'ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n'ime Kraịst. ( 1 Ndị Kọrịnt 15:22 ) N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n’iyi. (Jọn 3:16) Ekele dịrị Chineke n’igosi ịhụnanya o nwere n’ebe anyị nọ na, mgbe anyị nọ n’okpuru iwu nke mmehie na ọnwụ, Kraịst nwụrụ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke ka o were ọbara ya gu anyị n’onye ezi omume site n’ịzọpụta anyị n’ọnụma nke Chineke. (Ndị Rom 5:8-9)
A maara ebe ndị nwụrụ anwụ dị ka Sheol n'asụsụ Hibru na Hedis n'asụsụ Grik. ( 1 Samuel 2:6 ) N’ebe ahụ ka a na-ata ndị ajọ omume ahụhụ, a na-akasikwa ndị ezi omume obi ruo ụbọchị ikpe. ( Luk 16:22-23 ) E weere Tatarọs, bụ́ abis kasị omimi nke Hedis, dị ka ebe ndị mmụọ ozi dara ada, bụ́ ebe e debere ha ruo ụbọchị ikpe. (2 Pita 2:4)
Dị nnọọ ka a na-achịkọta ata ma gbaa ọkụ, otú ahụ ka ọ ga-adịkwa n’ọgwụgwụ oge a ga-ebibi ndị ajọ omume. ( Matiu 13:40 ) Ọbụna ugbu a, a tọgbọrọ anyụike na mgbọrọgwụ osisi. Ya mere, anēb͕utu osisi ọ bula nke nāmighi nkpuru ọma, tubà kwa n'ọku. ( Luk 3:9 ) Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị anọgide na-adị n’ime Kraịst, a na-atụfu ya dị ka alaka wee kpọọ nkụ; ewe chikọta alaka nile, tubà ha n'ọku, rechapu kwa ha. (Jọn 15:6) Ndị ahụ mịịrị mkpụrụ n’ime Kraịst n’otu oge, ma daa azụ, ọ bụrụ na ha amịa ogwu na uke, ha abaghị uru, ọ dịkwa nso ịbụ ndị a bụrụ ọnụ, a ga-akpọkwa ọgwụgwụ ha ọkụ. ( Ndị Hibru 6:8 ) Mgbe Nwa nke mmadụ ga-alọghachi, Eze ahụ ga-asị ndị nọ n’aka ekpe ya, “Sinụ n’ebe m nọ pụọ, unu a bụrụ ọnụ, banye n’ọkụ ebighị ebi e dobere ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.” (Matiu 25:41)
A na-akpọ ebe ikpeazụ ibibi ndị ajọ omume dị ka Gehena, okwu Jizọs ji mee ihe mgbe o kwuru, sị: “Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma anụ ahụ n’ọkụ mmụọ (Gehena). ( Matiu 10:28 ) A maara Gehenna, nke a a a a am buru a ] b ia a ib ia aj o. (2 Ihe E Mere 28:3) Gehena nọgidere bụrụ ebe nsị na-ere ọkụ, anụ ahụ na-ere ọkụ, na ihe mkpofu bụ́ ebe ikpuru na ikpuru na-esi n’ime mkpọ ahụ rịa, anwụrụ ọkụ na-esikwa ike ma na-arịa ọrịa. ( Aịzaya 30:33 ) Ihe atụ Gehena bụ hel; ebe nbibi rue mb͕e nile ebighi-ebi, ebe ọku nādighi-ere ọku, na ikpuru adighi-akwụsị kwa idọba. (Mak 9:47-48) Mgbe e bibiri ndị ajọ omume n’ime ọdọ ọkụ ahụ—nke a bụ ọnwụ nke abụọ—mgbe ahụ a ga-atụbakwa ọnwụ na ebe ndị nwụrụ anwụ (hades) n’ime ọdọ ọkụ ahụ ma kpochapụ. ( Mkpughe 20:13-15 )
Jizọs mere ka o doo anya na anyị kwesịrị ịtụ egwu hel (Gehena) karịa ọnwụ - na anyị kwesịrị ịtụ egwu onye nwere ikike ịtụba n'ọkụ mmụọ karịa ndị nwere ike igbu anụ ahụ. ( Luk 12:4-5 ) Ọ ka mma ka a tụfuo otu n’ime akụkụ ahụ́ anyị ndị na-eme anyị mmehie karịa ịtụba ahụ́ anyị dum n’ọkụ mmụọ. ( Matiu 5:30 ) Ọ ka mma ịbanye ná ndụ ngwụrọ ma ọ bụ aka tufuo karịa ịtụba ya n’ọkụ mmụọ. (Mak 9:43) Ọ dị mma ịbanye ná ndụ ngwọrọ karịa ka a ga-eji ụkwụ abụọ tụba n'ọkụ mmụọ. ( Mak 9:45 ) Ọ ka mma iji otu anya banye n’alaeze Chineke karịa ka e ji anya abụọ tụba n’ọkụ mmụọ. (Mak 9:47)
Mgbe e gburu Jizọs, Chineke mere ka o si n’ọnwụ bilie, e hapụkwaghị mkpụrụ obi ya n’ime Hedis. ( Ọrụ 2:31 ) E buliwo ya elu n’aka nri Chineke dị ka onye ndú na onye nzọpụta. ( Utom 2:33 ) Enye ama akpa onyụn̄ odu uwem ke nsinsi, ndien idahaemi enye enyene ukpọhọde n̄kpa ye Hades. ( Mkpughe 1:18 ) Ọnụ ụzọ ámá Hedis agaghịkwa emeri Chọọchị ya. ( Matiu 16:18 ) N’ihi na dị ka Nna m na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na-enye ha ndụ, otú ahụ ka Ọkpara ya na-emekwa ka ndị ọ chọrọ dị ndụ. ( Jọn 5:21 ) N’ihi na Nna m adịghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyewo Ọkpara ya ikpe nile. (Jọn 5:22) Onye ọ bụla nke na-anụ okwu ya wee kwere adịghị abịa n'ikpe, kama o si na ọnwụ gabiga na ndụ. ( Jọn 5:24 ) Oge awa na-abịa, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Ọkpara Chineke, ndị na-anụkwa ga-adị ndụ. ( Jọn 5:25 ) N’ihi na dị ka Nna m na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na-eme ka ha dị ndụ, otú ahụ ka o mewokwa ka Ọkpara ya nye ndị ọ chọrọ ndụ. ( Jọn 5:21 ) Chineke enyewo Jizọs ikike n’ebe anụ ahụ́ niile nọ, ka o nye onye ọ bụla ọ chọrọ ndụ ebighị ebi. ( Jọn 17:2 ) O nyewokwa ya ikike nile ikpe ikpe, n’ihi na ọ bụ Ọkpara nke mmadụ. (Jọn 5:27)
Oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga-anụ olu Nwa nke mmadụ wee pụta, ndị mere ezi ihe ga na mbilite n'ọnwụ nke ndụ, na ndị mere ihe ọjọọ na-mbilite n'ọnwụ nke ikpe. ( Jọn 5:28-29 ) A ga-enwe mbilite n’ọnwụ nke mbụ nke ndị ezi omume na mbilite n’ọnwụ nke abụọ nke ikpe. ( Mkpughe 20:4-6 ) N’ụbọchị ikpe, ndị nwụrụ anwụ, ndị ukwu na ndị nta ga-eguzo n’ihu ocheeze ahụ, a ga-emeghekwa ihe ndekọ nke gụnyere akwụkwọ nke ndụ. ( Mkpughe 20:12 ) Ọnwụ na Hedis ga-enyefe ndị nwụrụ anwụ, a ga-ekpekwa ha ikpe, onye ọ bụla n’ime ndị nwụrụ anwụ, dị ka ihe ha mere si dị. ( Mkpughe 20:13 ) A ga-atụba onye ọ bụla aha ya edeghị n’akwụkwọ nke ndụ n’ime ọdọ ọkụ nke bụ ọnwụ nke abụọ. (Mkpughe 20:15) A ga-atụba ọnwụ na Hedis n’ime ọdọ ọkụ na sọlfọ—nke a bụ ebe ekwensu ga-ebi. ( Mkpughe 20:14 ) Ngọzi na-adịrị ndị nsọ bụ́ ndị ga-ekere òkè ná mbilite n’ọnwụ mbụ! N'ime ndị dị otú ahụ ọnwụ nke abụọ enweghị ike; ha ga-abụ ndị nchụ-aja nke Chineke na nke Kraịst ma ha ga-eso ya chịa. ( Mkpughe 20:6 ) Ma ndị na-eme ihere—na ndị na-enweghị okwukwe—na igbu ọchụ—na ndị na-akwa iko—na ndị na-eme amoosu—na ndị na-efe chi ụgha dị iche iche—na ndị nile na-aghọ aghụghọ; òkè ha ga-abụ n’ime ọdọ nke na-ere ọkụ na sọlfọ, nke bụ ọnwụ nke abụọ. (Mkpughe 21:8)
Mmehie bụ ọnwụ, ma ugbua amara na-achị site n'ezi omume na-eduba ndụ ebighị ebi (Ndị Rom 5:21). Ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke n'efu bụ ndụ ebighị ebi. ( Ndị Rom 6:23 ) Nke a bụ uche Nna, ka onye ọ bụla nke na-ele Ọkpara ahụ anya ma kwere na ya wee nwee ndụ ebighị ebi, Kraịst ga-akpọlitekwa ya. ( Jọn 6:40 ) Onye ọ bụla nke kwere n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; Onye ọ bụla nke na-adịghị ege Ọkpara ya ntị agaghị ahụ ndụ, ma ọnụma Chineke na-adịgide n'ahụ ya. (Jọn 3:36) Akwụkwọ Nsọ tụrụ ihe niile n'ụlọ mkpọrọ n'okpuru mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ nke sitere n'okwukwe na Jizọs Kraịst. ( Ndị Galeshia 3:22 ) Ọ ga-enye ndị ji ndidi n’ime ihe ọma na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ndụ ebighị ebi; ma nye ndị na-achọ onwe ha ma na-adịghị erube isi n’ezi-okwu, ma na-erube isi n’ajọ omume, a ga-enwe ọnụma na ọnụma. (Ndị Rom 2:7-8)
Dị ka nkwa Chineke anyị kwere, anyị na-echere eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ nke ezi omume bi n’ime ya. (2 Pita 3:13) Ndị ruru eru iru ọgbọ na-abịanụ na ibilite ná ndị nwụrụ anwụ apụghị ịnwụ ọzọ, n’ihi na ha na ndị mmụọ ozi hà nhata, bụrụkwa ụmụ Chineke, bụ́ ụmụ mbilite n’ọnwụ. ( Luk 20:35-36 ) N’ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke, ha anatawokwa mmụọ edorodoro anya dị ka ụmụ. (Ndị Rom 8: 14-15) Anyị na-anọkwasị na Mmụọ Nsọ, nke bụ nkwa nke nketa anyị ruo mgbe anyị nweta ihe nketa nke ya. ( Ndị Efesọs 1:13-14 ) Ihe e kere eke na-atụsi anya ike ịhụ mkpughe nke ụmụ Chineke (Ndị Rom 8:19) ka e wee tọhapụ anyị n’agbụ nke ire ere anyị (Ndị Rom 8:21). Ụmụ nke Chineke na-asụ ude n’ime obi na-eche nkuchi dị ka ụmụ-olileanya nke mbilite n’ọnwụ. (Ndị Rom 8:23)